Izizathu ezi-9 zokuthi kungani ama-Wigs e-BFF yamantombazane – SL Raw Virgin Hair LLC.
Izizathu ezi-9 zokuthi kungani ama-Wigs e-BFF yamantombazane
Meyi 31, 2021
Kunesizathu sokuthi kungani siqamba amawigi ethu. Bangabangane bethu phela. Bakhona uma sibadinga. Baphuma nawe nsuku zonke, kuye ngesimo sethu sengqondo.
Ngakho, yebo, siyawathanda amawigi ethu, futhi nazi izizathu eziyi-9 zokuthi kungani.
1. Amawigi ekhwalithi ephezulu angakongela imali
Yebo, siyazi ukuthi ikhwalithi engcono yewigi, izindleko ziphezulu. Kodwa lawa amawigi ekhwalithi ephezulu angahlala iminyaka. Futhi uyazi ukuthi basiza ngani? Vakashela isaluni njalo emavikini angu-6-8.
Ngakho-ke, ngamawigi ambalwa eqoqweni lakho, unesibopho sokulondoloza imali ngokunciphisa inombolo yakho yohambo ukuya kumculi wesitayela.
2. Zilungele izitayela zokuzivikela
Uma amathuluzi engeziwe kanye nokukhohlisa senza ezinweleni zethu zemvelo, sibangela umonakalo omkhulu. Ukugqoka iwigi kukuvumela ukuthi ushiye izinwele zakho zilulame, uqine, futhi ugcine ubude.
Zizovikela izinwele zakho esimweni sezulu, ngakho-ke ungakhathazeki ngezinwele zemvelo ezomile, ezishisayo uma isimo sezulu sinomswakama kakhulu.
3 Zifihla ukulimala kwezinwele noma izinkinga zezinwele
Izinwele zethu ziyingxenye enkulu yobuntu bethu kangangokuthi umcabango wokuzilahlekelwa ungaba nomthwalo onzima womzwelo.
Ngakho-ke, uma ubhekene nezinwele ezizacile, ukuphuka, noma ezinye izinkinga zezinwele ongafuni ukuthi ziphendule imibuzo usuku lonke, khona-ke iwigi ingasusa yonke leyo mibuzo engafuneki ngezinwele zakho.
4. Zama ukubukeka okusha ngaphambi kokuthi uzibophezele
Amawigi ayindlela enhle yokuhlola ukubukeka/ukusikwa ngaphambi kokwenza isinqumo esingunaphakade.
Ngaphambi kokuthi uzibophezele kwisitayela esisha sezinwele zakho zemvelo - njengokusikwa kwe-bob okungenzeka noma kungahambisani nezici zakho - ungathola iwigi ukuze ubone ukuthi ungathanda yini.
5. Unganyakazisa ukubukeka okuhlukile zonke izinsuku zeviki.
Amawigi ayindlela eshesha kakhulu yokuguqula ukubukeka kwakho ngamaminithi.
Iwigi izokuvumela ukuthi ushintshe izitayela zakho zonke izinsuku zeviki.Kusukela ekuthunjweni okuhlukene kuya kubude obuhlukene nezitayela - unezinketho eziningi ukuze uvumelane nesimo sakho sengqondo
6. Ama-Wigs azokongela isikhathi
Cha, ngeke udale lokho kuqhuma okumangalisayo emizuzwini eyi-10. Kuzothatha isikhathi. Kodwa iwigi? Lokho nje kulungele ukuhamba.
Ngakho, yonga isikhathi ekwenzeni izinwele zakho zemvelo futhi uvumele iwigi yakho eyintandokazi i-BFF ikwenzele umsebenzi.
7. Ube nosuku oluhle lwezinwele njalo
Izinwele zethu zingaba i-booster enjalo kunoma yiluphi usuku. Futhi uma sinakekela amawigi ethu ngendlela efanele, ungaqiniseka ukuthi ngeke ube nosuku olubi lwezinwele namuhla.
Ngakho-ke, une-twist-out ehlulekile noma ukuwasha nokuhamba? Thatha iwigi yakho ye-BFF uhambe.
8 Amawigi anika izinwele zakho ukuphumula
Uma ubuluka futhi weluka izinwele zakho kakhulu, kungase kube yisikhathi sekhefu. Futhi enye yezindlela ezilula zokuthola lelo khefu ukusebenzisa iwigi.
Ayikho indlela elula yokugqoka ngezikhathi ezehlukene kunewigi. Ziyisiqiniseko sokuzethemba futhi ziyisengezo esihle nje ekubeni ngowesifazane othanda ukuphila futhi ojabulela izinwele zabo.
Ngakho-ke, lezo ezinye zezizathu ezimbalwa zokuthi kungani sithanda ama-wig BFF ethu. Futhi uma ufuna amawigi ezinwele zabantu angcono kakhulu, phequlula iqoqo lethu lewigi elikhuthazwe usaziwayo futhi uthole iwigi yakho entsha ye-BFF.
Futhi uma uthola iwigi oyikhonzile, sitshele kumazwana angezansi, kungani ugqoka iwigi?
Tags: beauty, Beauty blogger, beauty trends, celebrity hair, hair care, hair education, hair extensions, hair news, Hair talk, Lace front wigs, protective styles, weave lovers, weave wearers, wigs, women hair